Adeegga Kormeerka - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Oo daboolaya aagagga warshadaha Shiinaha.
Lahaanshaha sheybaarka guddiga
Hawlaha adeegga (seddex tallaabo kaliya, kormeerka ayaa la sameeyaa）
Naga dhex riix meesha iyo alaabada dabin.
Waxaan u diri doonnaa kormeerayaal xirfad leh meesha baaritaanka.
Waxaad heli doontaa warbixinta kormeerka 12 saacadood gudahood.
Baadhitaanka hore ee rarka (PSI)
Baadhitaanka horay loo soo qaado waxaa la sameeyaa marka sheygu 100% dhammaado oo 80% la buuxiyo. Waxaan ku sameynaa kormeer tijaabo ah oo aan kala sooc lahayn sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
Warbixinta ka hor rarka, waxaan si buuxda uga tarjumeynaa tirada rarka, xaalada baakadaha iyo in tayada wax soo saarku ay gaarsiisan tahay heerarka.
Si looga fogaado wax kasta oo khatar ku ah amarkaaga, hubi in alaabada aad soo iibsanaysaa ay buuxiso tilmaamahaaga iyo shuruudaha qandaraaska kahor intaadan bixin lacagta sheyga.
Waxyaabaha kormeerku ka kooban yahay waxaa ka mid ah qaabka wax soo saarka, cabbirka, midabka, shaqada, muuqaalka, shaqada, nabadgelyada, isku halaynta, habka baakadaha, calaamadeynta la xidhiidha, xaaladaha kaydinta, nabadgelyada gaadiidka iyo shuruudaha kale ee macaamiisha la cayimay.
Inta lagu jiro Kormeerka Waxsoosaarka (DPI)
Marka sheyga la dhammeeyo 50%, waxaan hubineynaa oo aan qiimeyneynaa tayada alaabooyinka nus-dhammaadka ah iyo kuwa dhammaaday iyadoo la raacayo qeexitaanka alaabtaada waxaana soo saarnaa warbixin kormeer ah.
Inta lagu jiro kormeerka wax soo saarka ayaa kaa caawin kara inaad xaqiijiso in tayada, shaqada, muuqaalka iyo shuruudaha kale ee alaabtu ay waafaqsan yihiin qeexitaankaaga inta lagu gudajiro nidaamka wax soo saarka, sidoo kale waxay faa'iido u tahay in goor hore la ogaado wixii aan u hogaansamin, taas oo yareyneysa daahitaanka warshadda. khataraha gaarsiinta.
Waxyaabaha kormeerka ah waxaa ka mid ah qiimeynta qadka wax soo saarka iyo xaqiijinta horumarka, awood u siinta alaabada cilladaysan in lagu hagaajiyo waqtigeeda, qiimeynta waqtiga dhalmada, kormeerida alaabada nus-dhamaadka ah ee geeddi-socodka wax soo saar kasta, iyo hubinta qaabka, cabirka, midabka, hannaanka, muuqaalka, shaqada, amniga, isku halaynta, habka baakadaha, calaamadeynta la xiriirta, xaaladaha kaydinta, amniga gaadiidka iyo shuruudaha kale ee macaamiisha lagu cayimay ee alaabada la dhammeeyay.
Kormeerka Wax Soosaarka Hore (IPI)
Markay alaabtaadu dhamaato 20%, kormeerayaasheena ayaa imaan doona warshada si ay u sameeyaan kormeerka soo socda ee badeecada.
Kormeerkani wuxuu ka fogaan karaa dhibaatooyinka dufcadda iyo cilladaha waaweyn ee amarka oo dhan. Haddii ay dhibaato jirto, waxaad haysataa wakhti aad ku sii wanaajiso si aad u hubiso waqtiga keenista iyo tayada wax soo saarka.
Waxyaabaha kormeerka ah waxaa ka mid ah xaqiijinta qorshaha wax soo saarka, kormeerka qaabka badeecada la dhammeeyay, cabbirka, midabka, hannaanka, muuqaalka, shaqada, amniga, kalsoonida, habka wax lagu rakibo, calaamadeynta la xiriirta, xaaladaha kaydinta, nabadgelyada gaadiidka, iyo shuruudaha kale ee macaamiisha lagu cayimay
Kormeerka Baadhitaanka & Aqbalaada Oo Buuxda
Dhammaan kormeerrada waa la samayn karaa ka hor ama ka dib baako sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha. Iyadoo la raacayo shuruudaha macaamiisha, xarunta kormeerka shirkadeena ama goobta uu cayimay macmiilku, waxaan ku kormeeri doonnaa muuqaalka, shaqada iyo amniga shey kasta; kala saar alaabta wanaagsan iyo alaabada xun iyadoo si adag loo waafajinayo shuruudaha tayada macaamiisha.
Natiijooyinka kormeerkana ugu soo warbixi macaamiisha waqti ku habboon. Ka dib marka kormeerka la dhammeeyo, badeecadaha wanaagsan waxaa lagu buuxiyaa sanduuqyo waxaana lagu xiraa shaabado gaar ah. Badeecadaha cilladaysan ayaa loo kala saaraa oo lagu celiyaa warshadda.
ROC waxay xaqiijineysaa in shey kasta oo la soo diray uu buuxin doono shuruudahaaga tayada: Waxaan bixin doonaa xogta jawaab celinta oo ay ka mid yihiin:
Dhammaan warbixinnada kormeerka, sawirrada la xiriira, xaaladaha aan caadiga ahayn, sababaha, ka-hortagga, iyo hababka wax-soo-saarka warshadda kormeerka ROC waxay diiradda saareysaa kormeerka suuqa Japan. Fulinta adag ee nidaamka maaraynta qaabka Jabbaan, oo leh shaqaale kormeer xirfadeed iyo goobaha kormeerka adag, waxay ku siin karaan adeegyo kormeer xirfadeed oo buuxa xarunta baarista.
Kormeerka Waxsoosaarka (PM)
Kormeerayaasha waxaa loo diraa warshada bilowga wax soosaarka si ay ula socdaan una xaqiijiyaan geedi socodka wax soo saarka oo dhan, tayada, iyo horumarka wax soo saarka.
Falanqee oo soo hel sababaha wax soo saarka tayada aan caadiga ahayn, sameyso ka hortag sababaha, xaqiiji hirgelinta warshadda, uguna warbixi dhammaan xaaladaha goobta ogeysiiyeyaasha waqtiga ku habboon.
Cilladaha wax soo saarka iyo horumarka wax soo saarka ayaa lagu ogaadey waqtiga waqtiga hawsha wax soo saarka, iyo qorshooyinka hagaajinta waqtiga ayaa loo sameeyaa si loo hubiyo in alaabadaada si habsami leh loo soo saari karo inta lagu jiro geedi socodka wax soo saarka.
Nuxurka kormeerka waxaa ka mid ah maareynta horumarka wax soo saarka, maareynta qeybaha xun iyo xakamaynta inta lagu jiro wax soo saarka, shuruudaha hagaajinta ee warshadda, xaqiijinta hirgelinta hagaajinta, xaqiijinta natiijooyinka hirgelinta, jawaab celinta waqtiga ku saabsan xaaladaha wax soo saarka iyo xaaladaha aan caadiga ahayn.
Hantidhowrka Warshadaha (FA)
Marka loo eego shuruudaha hanti dhowrka, hanti dhowrka ROC wuxuu baari doonaa kalsoonida ganacsiga soo saarayaasha, awoodda wax soo saar, nidaamka maaraynta tayada, hanti dhowrka mas'uuliyadda bulshada, iyo abaabulka shirkadda iyo xaaladaha wax soo saar.
Waxaan hubinaa warshadeheena si aad u doorato alaab-qeybiye saxda ah.
Qiimeynta waxaa ka mid ah liisanka ganacsiga warshadda, caddeynta warshadda iyo xaqiijinta aqoonsiga, macluumaadka xiriirka warshadda iyo goobta, qaabdhismeedka hay'adeed iyo baaxadda, dukumiintiyada iyo xakamaynta hannaanka, tababarka gudaha, alaabta ceeriin iyo maareynta alaab-qeybiyeyaasha, shaybaarka baaritaanka gudaha iyo qiimeynta, iyo awoodda horumarinta tusaalaha, tas-hiilaadka warshadaha iyo xaaladaha qalabka, awoodda wax soo saarka warshadda, diyaarinta iyo xaaladaha baakadaha, qalabka hagaajinta iyo diiwaannada dayactirka, baaritaanka biraha, nidaamyada xakamaynta tayada, mas'uuliyadda bulshada, fadlan tixraac liiska xisaabinta ROC ee faahfaahinta.
Kormeerka Raritaanka Weelka (CLS)
Adeegyada kormeerka waxaa ka mid ah qiimeynta xaaladda weelka, hubinta macluumaadka badeecada, hubinta tirada badeecadaha ku raran weelka, hubinta macluumaadka baakadaha, iyo kormeerka dhammaan howlaha haanta weelka, si aan kala sooc lahayn u dooranaya sanduuq alaab ah si loo hubiyo muuqaalka iyo shaqada.
Si looga fogaado halista sare ee rarida badeecada qaldan ama waxyeelada leh, ama tiro qaldan, iwm. Kormeerayaashu waxay kormeeraan goobta ay wax ka daabacayaan si loo hubiyo in alaabadaadu ay si nabdoon u buuxsan yihiin.
Waxyaabaha kormeerku ka kooban yahay waxaa ka mid ah in la duubo xaaladaha cimilada, waqtiga imaatinka kunteenarka, nambarka weelka iyo lambarka trailer; haddii weelku dhaawacan yahay, qoyan yahay ama uu leeyahay ur gaar ah, tiro iyo xaalad baakad dibadeed; si aan kala sooc lahayn u hubiyo sanduuq alaab ah si loo xaqiijiyo inay yihiin alaabooyinka dhab ahaan loo baahan yahay in lagu rakibo haamaha; kormeerida hawsha rarka weelka si loo hubiyo waxyeelada ugu yar loona kordhiyo ka faaiidaysiga meelaha; ku xiridda konteynarrada shaabaddo kastam; duubista shaabadaha, iyo waqtiyada bixitaanka weelka.
Xirfadlayaal ku xeel dheer alwaaxda, maxaa yeelay waxaan nahay soo saare
Waxaan nahay taageere xoogan oo loogu talagalay ilaalinta tayada kahor intaadan alaabadaada ka bixin Shiinaha.
Inta lagu jiro wax soo saarka, waxyaabo badan iyo faahfaahinta ayaa khaldami kara.
Helitaanka hay'adda xakamaynta tayada saxda ah waa guul.
Xirfadlaha ROC ee qalabka alwaaxda alwaaxda ayaa ka soo jeeda ROC 25 sano khibrad soo saarista alwaaxda.
Kormeerka Tayada ROC kaliya kaaama caawin karto inaad hubiso oo aad hagaajiso tayada wax soo saarka, laakiin sidoo kale waxay xoojin kartaa ganacsigaaga iyo iibkaaga, waxayna kaa caawin kartaa inaad dhisto sumcad wanaagsan maadaama aan hubinno in macaamiishaadu
Faa'iidooyinka kormeerka ROC
Hoos u dhig khataraha tayada wax soo saarka illaa kan ugu hooseeya
Quality Tayo sare
Hubso tayada wax soo saarkaaga oo aad mar keliya ku siiso tallaabooyinka horumarinta
Kaa caawin doonaa inaad hubiso heerka baasaska
Ely Waqti ku habboon
Hubso waqtiga dhalmada
Yaree khataraha ganacsigaaga
◎ Waxyaabaha ugu habboon
Kaa caawinaya inaad doorato alaab-qeybiyaha ugu fiican
Ka ilaali arrimaha tayada leh ee dhici kara
Hubso in alaabtaadu ay ku raran yihiin weelasha si sax ah iyo tiro sax ah
Qalabka Adeegga Kormeerka Alaabada
Qalabka alwaaxda kale